Iindaba-Ukusetyenziswa kwento yokuhluza intsimbi engenasici kwi-coalescer
Isicoci sentsimbi engenacici sahlulwe saza sahluza isihluzo, sintered waziva isihluzo kwaye sintering isihluzo. Izinto ekrwada sintered umnatha isihluzi element yenziwe ngentsimbi stainless sintered umnatha. Isixhobo sokucoca insimbi esingenasici sisetyenziselwa izixhobo ezahlukeneyo zokucoca ukufezekisa ukusebenza okuhle. Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd Xa izixhobo imveliso epheleleyo kunye nenkqubo yemveliso egqibeleleyo, sibonelela zonke iintlobo izisombululo ukuhluza kubaxumi bethu.
Namhlanje, ndingathanda ukwazisa ezinye iintlobo zesicelo seplanti yentsimbi engenamsebenzi, icoalescence dehydration filter
Ubukho bamanzi kwinkqubo yokuthambisa i-hydraulic kuya kubangela i-oxidation yeoyile, yenze i-oyile yehle, inciphise ukutyeba kwefilimu yeoyile, inciphise ukuthambisa, ibangele ukuguqulwa kweoyile kunye nokufakwa kwepolymeris ukwenza ii-macromolecule, ukutshintsha i-viscosity yeoyile, ukwenza i-organic acid, kwaye emva koko yonakalisa umphezulu wesinyithi, ukunciphisa okanye ukuphulukana namandla e-dielectric yeoyile. Ukucoca izixhobo zemveli kunye nezixhobo zokuzahlula, kunzima kakhulu ukwahlulahlulahlulahlula ulwelo olunye kolunye. Icebo lokucoca ulwelo lokwahlulahlula okuphuhliswe yinkampani yeXinxiang Rixin idibanisa ukucoca kunye nokuhambisa amanzi emzimbeni ngendlela efanelekileyo, enokuthi isuse ukungcola kwamasuntswana, amanzi e-emulsified kunye namanzi asimahla kwioyile ngaphandle kokonakalisa umgangatho wemveliso yoqobo. Kwioyile equlathe isixa esikhulu samanzi, isiphumo sokwahlukana sibaluleke ngokukodwa, kwaye isantya sokwahlukana siliqela ukuya kwishumi lamaxesha esantya sokwahlula ngokwesiko.
1.Ukusetyenziswa kwe coalescence ye-dehydration filter ye-oyile kubandakanya:
(1) Ukucocwa kweoyile yeinjini yomoya kunye neoyile yodluliso;
(2) Ukususwa kwamanzi kunye nokususa ukungcola kweoyile kwinkqubo yokuthambisa ngamanzi;
(3) Qhagamshela inkqubo yokuthambisa ngamanzi ukuze ucoceke kwenkqubo.
Umgaqo wobuchwephesha wokucoca ulwelo lwe-coalescence dehydration yile: ulwelo olwahlukeneyo lunendawo eyahlukileyo yokuxinana, kwaye xa ulwelo luhamba ngomngxunya omncinci, kuncinci uxinzelelo lomhlaba, isantya sokudlula esikhawulezayo. Xa ulwelo oluxubileyo lwezigaba ezahlukeneyo luye kungena kwisahluli, kuqala singena kwisihluzi se-coalescence. Isixhobo sokucoca ulungelelwaniso sinemigangatho emininzi yokucoca ulwelo, kwaye ububanzi bepore bonyusa umaleko ngomaleko. Ngenxa yomahluko kwimpixano yomphezulu, ioyile idlula kwisihluzi ngokukhawuleza, ngelixa amanzi ecotha kakhulu. Ngaphaya koko, ngenxa yento yehydrophilic yezinto ezihlanganayo zecebo lokucoca ulwelo, amathontsi amancinci amanzi afakwe kumgangatho wobume bokucoca, okukhokelela kulungelelwaniso lwamaconsi amanzi. Ngaphantsi kwesenzo samandla e-kinetic, amathontsi amancinci abaleka ngokuvula kwaye ngokuthe ngcembe enze amathontsi amakhulu, emva koko azinze phantsi kwentshukumo yomxhuzulane kwaye ahlukane neoyile. Emva kokudibanisa ioyile emva kwento yokuhluza, kusekho amachaphaza amancinci amanzi aqhubela phambili kwicandelo lokucoca ulwahlulo phantsi kwentshukumo ye-inertia. Isixhobo sesahluli senziwe ngezinto ezizodwa ze-hydrophobic. Xa ioyile idlula kwisahluli, amathontsi amanzi ayavalwa ngaphandle kwento yokuhluza, ngelixa ioyile idlula kwisahluli kwaye ikhutshwa kwindawo ephume kuyo.
2. Iimpawu zokucoca ulwelo lokucoca ulwelo ngokuhamba komzimba zezi zinto zilandelayo:
Idibanisa imisebenzi emibini yokucoca ngokuchanekileyo kunye nokusebenza kakuhle okuphezulu, kwaye isebenzise itekhnoloji ye- "coalescence separation" yokuphelisa amanzi emzimbeni, ene-dehydration ephezulu kunye nokusebenza ngamandla. Ngokukodwa ukwahlula isixa esikhulu samanzi kwioyile, inezibonelelo ezingenakuthelekiswa nanto zendlela yokuphuma kunye nendlela ye-centrifugal, enokuthi yaphule lonke ulwakhiwo lwe-emulsion yeoyile-yamanzi phakathi; Ngokuhluzwa kwenkqubo yokuhluza amasuntswana, ucoceko lwendlela lunokulawulwa ngokuzinzileyo kwimeko efunekayo yenkqubo, ukuze kuqinisekiswe ukucoceka kweoyile: iipropathi ezibonakalayo kunye neekhemikhali zeoyile azitshintshwanga, kwaye Inkonzo yeoli iyolulwa; ukusetyenziswa kwamandla kuncinci kwaye iindleko zokusebenza ziphantsi; Ukucwangciswa kwenkqubo kugqwesile kwaye ukusebenza okuqhubekayo kokusebenza komelele, okulungele ukusebenza kwi-Intanethi.
Inkqubo ukuhluza Particle: eendaba lokucoca ulwelo yenziwe * * izinto zokucoca ulwelo, kwaye indawo ukucoca enkulu ngempumelelo lokucoca ulwelo kakhulu amasuntswana ubumdaka kwaye wenze iimveliso oyile ukufikelela ucoceko eliphezulu kakhulu.
Inkqubo ye-Coalescence: inkqubo ye-coalescence yenziwe liqela lezinto zokucoca ulungelelwaniso, ngenxa yoko isiseko sokucoca ulungelelwaniso samkela ubume obukhethekileyo beemolekyuli. Amanzi asimahla kunye ne-emulsified water kwioyile aqokelelwa kumanzi amakhulu emva kokudlula kwisihluzi, emva koko azinze kwitanki yokugcina amanzi phantsi kwesenzo somxhuzulane.
Inkqubo yokwahlula: isihluzi sokucoca isihlunu senkqubo yokwahlula senziwe ngezinto ezizodwa ze-hydrophobic. Xa ioyile idlula kwisihluzi, amathontsi amanzi ayavalwa kumphezulu wecebo lokucoca ulungelelane kunye de ihlale kwitanki yokugcina amanzi ngenxa yomxhuzulane.
Inkqubo yokuhambisa amanzi: amanzi ahlukeneyo agcinwa kwitanki yokugcina amanzi. Xa ubude be-interface bufikelela kwixabiso elisetiweyo, vula ivalve yokutsala amanzi ide yehle kwinqanaba lolwelo olusezantsi. Vala ivelufa kwaye uyeke ukuhambisa amanzi.
3. Lo matshini unamanqanaba amahlanu enkqubo yokuhluza
(1) Udidi * * ukutsalwa kokucoca kusekwe kwiziko lokufunxa ioyile. Icebo lokucoca ulwelo erhabaxa likhusela impompo yeoyile kwaye landisa ubomi benkonzo yecebo lokucoca ulwelo eliphambili.
(2) Inqanaba lesibini lokucoca ulwelo lusetwe phezulu kwe coalescer. Ayinakongeza kuphela ubomi be-coalescer, kodwa ikwanciphisa umxholo wamasuntswana kulwelo oluhluziweyo.
(3) Icebo lokucoca ulwelo lesithathu lenza ukuba amanzi asonge kunye aze atshone.
(4) Inqanaba lesine lokucoca ulwelo lokucoca ngakumbi libhliza amathontsi amancinci eoyile ukufezekisa umphumo wokwahlula.
(5) Ukusebenza ngempumelelo kwemithombo yeendaba ngecebo lokucoca ulwelo, kunokusetyenziselwa ukucoca ioyile.
Oku kungasentla kukwazisa okufutshane kwe-coalescence ye-dehydration filter ye-stainless steel filter element.